Usoro nhicha na ngwa ngwa dị nro na akpachapụghị anya wee hapụ mbadamba 100% dị ọcha na akọrọ n'ime oge veryshorttime; .Alltypesofinkaa kwere omume, andthismachineisdesignedforen Environmentally Friendlyinging;
Rocket-330 Akụrụngwa Turret Ntugharị
Turret Rewind na-eji akpaka akwụkwọ tube ịkpọpu akụkụ usoro, nwere ike na-abụghị ndị na-akwụsị rewinding online, dị na rotary anwụ ọnwụ igwe, elu na-agba ewepụghị anwụ ọnwụ ọnwụ, slitting igwe, flexo obibi akwụkwọ igwe na na.
The igwe metụtara gbawara agbawa cellophane, PITA, OPP, CPP, Pee, PS, ịkwanyere na kọmputa nche kpọọ, kọmputa kọmputa, ngwa anya ihe, film mpịakọta, aluminum foil mpịakọta, nile di iche iche nke akwụkwọ na-apụta, film na-ebi akwụkwọ nke dị iche iche ihe., wdg
Otu ọ bụla nwere otu ala seramiiki seramiiki (5pc) (Lpi bụ nhọrọ)
Wenzhou Andy Machinery Co., Ltd.bụ ọkachamara emeputa na ahia nke labelụ ebi akwụkwọ na nkwakọ akụrụngwa. Anyị nwere ahụmahụ na-enye gị ezigbo mbipụta na ngwugwu ngwugwu. Ihe karịrị 100 esetịpụrụ labeelu flexo ígwè obibi akwụkwọ, slitting igwe & ịnwụ ọnwụ igwe arụnyere na Asia (Korea, Malaysia, Indonesia, Thailand na India), Europe (German, France, Spain, Italy)…
Smart-340 Unit Type 6 agba Flexograph Printin ...
Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ntụgharị tụgharịrị gaa na nsụgharị ihuenyo rotary ka ụlọ ọrụ nyocha na ụlọ nkwakọ ngwaahịa na-apụta site na ọrịa nje corona. 'Ọ bụ ezie na nke a abụrụla ihe isi ike siri ike nye onye ọ bụla, ọtụtụ gafee nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ nyocha ahụwo ịrị elu na ọchịchọ maka ...
Tarsus Group, onye nhazi Labelexpo Europe, na-eme atụmatụ iji wepụta ihe ngosi ya kachasị nwee mmasị ruo ụbọchị n'otu afọ site ugbu a, na-eweghachi ụlọ ọrụ ụwa ọnụ mgbe nsogbu ndị Covid-19 gbasasịrị. 'Mgbe ụlọ ọrụ akara na ngwugwu ngwugwu egosiputala oke nka ...